Fotoana hanadioana ny lohataona amin'ny programa marketing amin'ny mailaka | Martech Zone
Fotoana hanadioana io programa marketing amin'ny mailaka io
Alatsinainy Aprily 16, 2012 Alarobia, Aprily 11, 2012 Tempolin'i Lavon
Amin'ny vanim-potoanan'ny taona indray izao. Lava kokoa ny andro ary milamina kokoa ny andro. Matetika ny olona dia manararaotra ny fotoan'ny lohataona hahafahany manadio ny tranony hatrany ambony ka hatrany ambany. Fantatro fa efa nanao fanadiovana lalina tamin'ny fonenako nanetry tena aho. Tsy hevitra ratsy ny handika ny fahadiovana amin'ny programa marketing mailaka anao. Ireto misy toro-hevitra amin'ny fanadiovana lohataona:
Kirihitra! Makà fotoana hikosehana tsara ireo lisitrao. Jereo hoe iza no tsy mandray anjara amin'ny mailakao intsony. Tsy voatery hanome torohevitra azy ireo aho fa hamafana azy ireo, fa angamba afindrany amin'ny ampahan'ny azy ireo izay azonao apetraka miaraka amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifamofoana indray. Mamelombelona ny lisitry ny varotra mailakao ity ary manome antoka fa mandefa mailaka amin'ireo mpamandrika te-handray azy fotsiny ianao.
Fiainana Vaovao. Tiako foana amin'ny lohataona rehefa manomboka mamony indray ny voninkazo - tsara tarehy foana izany! Azo lazaina ho toy izany koa ve ireo fampielezan-kevitra amin'ny mailakao? Raha tsy izany dia makà fotoana hamelombelona ny volanao. Na dia tsara tarehy aza izy ireo, raha efa nampiasa herisetra iray ianao nandritra ny herintaona - mety ho tonga ny fotoana hanandramana endrika vaovao. Mamorona sangan'asa, ka rehefa mandray ny hafatrao ny mpamandrika dia gaga izy ireo fa tsara tarehy toy inona ny mailakao!
Poloney. Ny fanadiovana lohataona dia fotoana iray hijerena ireo masonao. Amin'ny maha mpivarotra mailaka anao dia azoko antoka fa efa nanao an'io ianao, saingy tena jereo izy ireo. Fakafakao mba hahitanao hoe inona ny atiny izay nandraisan'ny mpihaino anao. Azonao atao ny manandrana mifantoka amin'io ary mamorona mailaka roa mba hahitana raha mahazo valiny mitovy ianao na tsara kokoa!
Manandrama zavatra vaovao. Matetika aho no mampiasa ny fotoanako amin'ny fanadiovana lohataona ho fotoana iray hanamboarana toerana iray ao an-tranoko - hanandramana fandaharana vaovao hahitako izay fananganana tiako indrindra. Angamba izao ny fotoana hanandranao zava-baovao amin'ny programa marketing mailaka anao? Araka ny Merkle's "View From the Digital Inbox" tamin'ny 2011, "55% amin'ireo manana finday afaka Internet no mampiasa azy io hanamarinana ny kaonty mailaka azy ireo." Angamba tafiditra tao amin'ny rut ianao tamin'ny fampielezana mailaka nataonao. Aza mijanona eo! Andramo mifantoka amin'ny finday raha any no misy ny mpihaino na mandefa hafatra hisoratra anarana? Izay manome ny fampielezan-kevitra amin'ny mailakao fanampiny amin'ny vanim-potoana vaovao!
Mila fanampiana amin'ny fanadiovana ireo mailaka ireo? Mankanesa any amin'ireo consultant amin'ny marketing mailaka ao amin'ny Delivra. Faly izahay manome tanana manadio lohataona!
Tags: CleaningContent Marketingmailaka MarketingListssegmentationmpanjifa
Famolavolana, famolavolana ary fanatsarana tranokala
Apr 16, 2012 ao amin'ny 4: PM PM
Fotoana mety hanadio ny lisitry ny mailaka misy anao ary misy antony bebe kokoa hanaovana izany amin'ireo mpanome tolotra mailaka manivana izay noheverin'izy ireo ho hafatra "tsy mahaliana". Ny fanadiovana ireo adiresy mailakao taloha sy ireo tsy mpamaly dia hanampy be dia be ny tetikadin'ny mailakao! Zahao ity lahatsoratra ity raha mila fanazavana fanampiny momba ny politika vaovao http://spotright.com/digital-marketing/spotiq-segment-now/